SAWIRO: Somaaliya iyo Kenya oo heshiis gaaray Aqriso…. – Kismaayo24 News Agency
by Mohamed Abdirashid Abaajo 6th March 2019 015
Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta, ayaa heshiis ku gaaray magaalada Nairobi oo maanta ay wada-hadallo ku yeesheen.
Qoraal kasoo baxay Villa Somalia ayaa lagu sheegay in labada dal ay ku heshiiyeen in dib loo soo celiyo xiriirka labada dal iyo wada-shaqeynta.
Hoos ka aqriso warsaxaafadeedka Villa Somalia
Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay uga mahadcelinaysaa Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Mudane Abiy Axmed kaalinta uu ka qaatay wada hadalladan dib loogu yagleelayo xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya.
DEG DEG: SAWIRRO: Duulimaadyadii Jomo Kenyatta oo hakad galay iyo Xiisad ka taagan garoonka
TOP NEWS; Daawo Sawiro” Madaxweynha Galmudug oo talyaaniga kula kulmay Jaaliyadda Galmudug ee Wadankaasi ku Nool
Sanado Kadib Kooxda Burcad Badeeda oo afduubay markab Iran laga leeyahay
admin 24th November 2015